Yope April 6, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. ဒီနေ့ Crazy Stuff အတွက် video တိုတိုလေးတစ်ခု တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်..30 sec ဘဲရှိတာမို့ အားပေးပါဦး. လူတိုင်း ဒီလို ကြုံတတ်ပါတယ်. ကိုယ့်အလှည့်တုန်းက ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခဲ့သလဲဆိုတာ ..ပြောပြခဲ့ပါဦး.. www.yope.com.mm
Yope March 16, 2017
YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ… အလုပ်တစ်ခုရတဲ့ အခါ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားလဲ? တကယ့်လက်တွေ့မှာကော ဘယ်လိုတွေကြုံရလဲ? ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကို ရယ်မောစရာအဖြစ်ပြန်လည် ပြောပြကြရအောင်. www.yope.com.mm www.mizzima.tv
Yope March 2, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ. လူငယ်တွေကြားမှာ ရေပန်းစားလာနေတဲ့ Dab Dance ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမှာ အတူတူ ကနိုင်တဲ့ Dab Dance ဘယ်လိုကရမလဲ.. သိချင်လား ၁ မိနစ်ပဲ အချိန်ပေးလိုက်.. အခုဘဲ Dab ရအောင်.. www.mizzima.tv
Yope February 23, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ.. သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် ဘီစကစ်ကို မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော်.. သူက ဖင်လန်ကလာတာလေ.. အားပေးပါဦး.. www.mizzima.tv
Yope February 16, 2017
မင်္ဂလာပါ YOPE သူငယ်ချင်းတို့ရေ အသုပ်တစ်ပွဲကြောင့် အသည်းကွဲသွားတဲ့ နေပိုင်။ သူအသည်းကွဲပြီးနောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ။ www.mizzima.tv